Mayelana - Shanghai Chleh Exhibit Industry Ltd.
Ikhaya » Mayelana
I-Shanghai Chleh Exhibit Industry Ltd. Ingabe umkhiqizi wekhwalithi yekhwalithi ehamba phambili ehamba phambili, umihlo, u-backlit umi, indawo ephathekayo yokuhweba ibhodi, uhlelo lokubeka phansi, nezakhiwo zezemidlalo, i-truss kanye nesiteji, itende le-marquees eShanghai.
I-CL (Dala i-Legend) EXHIBIT esungulwe ku-2008, futhi sihlala siqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo eminingi yemiboniso nemicimbi yomcimbi, okuzama ukuhlinzeka ngomsebenzi omuhle kakhulu kumaklayenti avela emhlabeni wonke uma usebenzisa imikhiqizo yethu.
Ikhwalithi nokuphepha kungumgogodla wemikhiqizo yethu. Iqukethe isakhiwo sakhiwo, ubuchwepheshe be-welding nokulinganisa ukuphepha kokulayisha.
Ngenkathi yokuthuthukiswa singomunye wemisebenzi ehamba phambili yembukiso nemishini yomcimbi e-shanghai, simema ngobuqotho ukuthi uvakashele i-factory yethu e-shanghai.